Tiemoue Bakayoko ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်
Sergio Reguilon ကလေးဘဝအတ္ထုပ္ပတ္တိ Plus အားမရေမတွက်နိုင်သောအတ္ထုပ္ပတ္တိများ
ပင်မစာမျက်နှာ ဥရောပဘောလုံးပြိုင်ပွဲ ပြင်သစ်ဘောလုံးကစားသမား Tiemoue Bakayoko ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်
LB အကောင်းဆုံးအမည်ဝှက်ခြင်းဖြင့်လူသိများနေတဲ့ကွင်းလယ်အင်ဂျင်၏အပြည့်အဝပုံပြင်တင်ဆက်; '' Bakoko ''။ ကျွန်ုပ်တို့၏ Tiemoue Bakayoko ကလေးဘဝပုံပြင်ပေါင်းမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိဖြစ်ရပ်မှန်သူ့ရဲ့ကလေးဘဝအချိန်ကနေယနေ့အထိသည်သင်မှတ်သားလောက်ဖြစ်ရပ်များနှင့်ပြည့်ဝ၏အကောင့်ဆောင်ခဲ့ရမည်။ analysis ကျော်ကြားမှု, မိသားစုဘဝနှင့်သူ့ကိုအကြောင်းကိုအများအပြား OFF-အသံအချက်အလက်များရှေ့တော်၌မိမိဘဝအတ္ထုပ္ပတ္တိပါဝငျသညျ။ အခုဆိုရင်နောက်ထပ်ခွင့်ပန်ပြီးမှမပါဘဲ, Begin ခွင့်ပြုသည်။
Tiemoue Bakayoko ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်: ဘ0အစပိုင်း
Bakayoko ပိုကောင်းတဲ့လူနေမှုစေရန်ပြင်သစ်၏မြို့တော်မှအိုင်ဗရီကို့စ်ကနေရွှေ့ပြောင်းသူကိုမိဘများ 17 သြဂုတ်လ 1994 အပေါ်ပဲရစ်မြို့၌မွေးဖွားခဲ့သည်။
ရုံကသူ့အနက်ရောင်အားလုံးအတွက်အတော်များများလိုပဲသူတစ်ဦး French- အိုင်ဗရီကို့စ်အမွေအနှစ်ဖြစ်ပါတယ်။ တက်ကြီးထွားလာနေချိန်တွင်သူကအာဖရိကနွယ်ဖွားလူဦးအမြောက်အများရှိပါတယ်ရသောဆူး၏ရပ်ကွက်အတွင်းနေထိုင်ခဲ့ကြသည်။ ဒါဟာသမိုင်းအာဖရိကလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးကနေအနက်ရောင်လူများဟာသူတို့ရဲ့ကြီးမားကြီးမားအရေအတွက်လူသိများပဲရစ်အတွက်ရပ်ကွက်အတွင်းဖြစ်ခဲ့သည်။
Tiemoue Bakayoko ကလေးတစ်ဦးသည်သူ၏မိဘများအမြိုးမြိုးထှကျအလုပျလုပျမြင်သည်အတိုင်းနေချိန်တွင် menial အလုပ်အကိုင်အခွင့်အရုံစားပွဲပေါ်အစာကိုထည့်သွင်းခြင်းနှင့်အိုင်ဗရီကို့စ်မှာတိုးချဲ့မိသားစုများ Moni ပို့ပေးရန်။ ထိုကာလမှာအဖြစ်အများစုက menial အလုပ်အကိုင်များအနက်ရောင်အာဖရိကန်ပင်အလွန်ပညာတတ်သူမြားအားဖြင့်ပိုပြီးလိုက်ကြ၏။ ကျောင်း Going ငယ်ရွယ်လူကလေးများအတွက်ဦးစားပေးမဟုတ်ခဲ့ပေ။
Tiemoue Bakayoko ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်: တစ်ဦးကမ္ဘာ့ဖလားအားဖြင့်မှုတ်သွင်း
ရုံနဲ့တူ Sadio လည်ဆံသူဟာပြင်သစ် 1998 ကမ္ဘာ့ဖလားမှတဆင့်ဘောလုံးကွင်းထဲမှာမှုတ်သွင်းတယ်။ သူကပထမဦးဆုံးအဖွင့်ပွဲအတွက်ပြင်သစ် outsmarting နှင့်ပြင်သစ်ပြိုင်ပွဲ၏ဘုန်းအသရေစကားပြောရန်ဆင်းကိုကြည့်ဆီနီဂေါ, သူ့ဇာတိမြေ (အိုင်ဗရီကို့စ်) မှတစ်ဦးသည်အိမ်နီးချင်းမြင်နေခြင်းဖြင့်အံ့အားခဲ့သည်။
သူ့ကိုအလိုအရ, "ငါသည်အဖွဲ့ထဲမှာထင်ရှားတဲ့အနက်ရောင်ပြင်သစ်ကစားသမားများ၏သတ္တိအားဖြင့်မှုတ်သွင်းခံခဲ့ရသည်။ ကျွန်မအကြီးအကာကွယ်စောင့်ရှောက်ခြင်းနှင့်ကာကွယ်ရေးကွင်းလယ်လူကိုခစျြသူတစ်ဦးဖြစ်ခဲ့သည်။ ပက်ထရစ်ဗီအဲရာ, လီလီ Thuram နှင့် Marcel Desailly များ၏အကြိုက်ငါ့အကြိုက်ဆုံးခဲ့ကြသည်။ သူတို့ရဲ့ဖျော်ဖြေပွဲငါ့အဘို့အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပေါ်။ သို့သျောလညျးငါဖြစ်လာအရာကိုများ၏အုတ်မြစ်ချသူကို Claude Makalele ဖော်ပြရန်ပျက်ကွက်လို့မရပါဘူး။ "
များစွာသောအခြားအနက်ရောင်လေးတွေလိုပဲ, ပညာရေး Bakayoko များအတွက်ကျော်သွားခဲ့သူကိုချက်ချင်းပြင်သစ် 1998 ကမ္ဘာကြီးခွက်ကိုပြိုင်ပွဲအပြီးတွင်ဘောလုံးနှင့်အတူအစွဲအလမ်းဖြစ်လာခဲ့သည်။ သူ့မိဘခေါ်တော်မူနားလည်သူတစ်ဦးသင့်လျော်စတင်ရှိသည်ဖို့လိုအပ်အားလုံးထောက်ခံမှုပေးခဲ့သည်။ သူတို့က (ကဘောလုံးအကယ်ဒမီမှာသူ့ကိုမှတ်ပုံတင်le ကလပ်က de ဘောလုံးက de ပဲရစ် 15)5၏အသက်အရွယ်မှာ။
သူ့ရဲ့ပထမဆုံးအကယ်ဒမီအဆင့်မှာဘောလုံးကစားနေစဉ် Bakayoko ထက်မြက်၏အကြီးမြတ်ဆုံးအဆင့်ကိုပြသသည်။ သူဟာနည်းလမ်းအကယ်ဒမီမှာပျမ်းမျှအားဆိတ်သငယ်အထက်နှင့်အကောင်းဆုံးဆိဘောလုံးသမားအဖြစ်သရဖူဆောင်းတစ်ချိန်ချိန်ဖြစ်ခဲ့သည်။ ပဲရစ် 15 သူ့မိဘနာမတော်ဖြင့်ပိုကောင်းတဲ့အကယ်ဒမီတစ် switch ကိုအစပျိုးရန်ခွင့်ပြုမပြုမီလေးနှစ် (အသက်9အထိ) အတွက်သူ့ကိုထားရှိမည် -, CA ပဲရစ် Charenton။ သူကသာရန်နောက်ထပ်အပြောင်းအရွေ့မချခင် Charenton မှာတစ်နှစ်ကစား Montrogue FC အသင်း 92 ။ ဒီကလပ်မှာသူတစ်ဦးကျြောလှားနိုငျပြဿနာတစ်ခု Waterloo တွေ့ဆုံရန်။
Tiemoue Bakayoko ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်:ဆင်းရဲခြင်းကို
Montrogue FC အသင်း 10 အဘို့ကစားနေစဉ်လူငယ်တစ်ဦးကကစားသမား (အသက် 92) အဖြစ်, Bakayoko သူဖြစ်ခဲ့သည်ချေါသောအရာကိုတဆင့်တစ်ဦးကျိုးခြေထောက်ခံစားခဲ့ရ '' တစ်ဦးလည်ချောင်းနာစိန်ခေါ်မှု '' တစ်ဦးပြိုင်ဘက်ကနေ။ ဒဏ်ရာ၏ပြင်းထန်မှုသည်သူ၏ငယ်ရွယ်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအတွက်ရေရှည်ရပ်တန့်ဖို့ဦးဆောင်ခဲ့သည်။
"အချိန်အတွက်တစ်ချိန်ချိန်မှာကျွန်မရဲ့ငယ်ရွယ်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းတစ်ခုရုတ်တရက်အဆုံးကိုငါမြင်၏" ။ ဒါဟာငါ့အဘို့အထူးကြပ်မတ်ဆင်းရဲခြင်းကိုတစ်ဦးကာလဖြစ်ခဲ့သည်။ ကြှနျတေျာ့ ပြန်လည်ထူထောင်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်ကိုနှောင့်နှေးခဲ့ငါ့ကို "ဘောလုံးကစားခြင်းမရှိဘဲနီးပါး3နှစ်ပေါင်းသုံးဖြုန်းကိုမြင်လျှင် Bakayoko ကပြောပါတယ်။
Tiemoue Bakayoko ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်:ြငင်းပယ်ခြင်း
ယခုနှစ် 2008 ခုနှစ်, distal humerus ကျိုးနေတဲ့အပြည့်အဝပြန်လည်နာလန်ထူအတည်ပြုခဲ့သည်ခဲ့သည်။ ထို့နောက်သူသည်အနည်းဆုံးအဖြစ်သာ 13 နှစ်ပေါင်းဖြစ်ခဲ့သည်။ မိမိအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအတွက်ချွတ် left ဘယ်မှာကောက်နေမတိုင်မီအပြည့်အဝပြန်လည်နာလန်ထူအတည်ပြုပေးရန်ရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်အဘို့စောင့်ကြည့်နေကြတယ်။ ကံမကောင်းစွာမျှကလပ်ကြောင့် form ကိုဆုံးရှုံးဖို့သူ့ကိုခူး။ သူကပင်မိမိအယခင်ဘောလုံးအကယ်ဒမီမှထုတ်ဝေမှုကိုအငြင်းခံစားခဲ့ရသည်။
ဒါဟာနောက်ဆုံးတော့သူ့ကိုစီမံခန့်ခွဲမှုတို့ကအတော်ကြာအတှေးအနောကျသူ၏ပုံစံကိုပြန်လည်ဖို့အခွင့်အလမ်းပေးသော Rennes မှာဘောလုံးအကယ်ဒမီဖြစ်ခဲ့သည်။ သူတို့ဟာသူတစ်ချိန်ကမိမိအဟောင်းများကိုကလပ်အတွက်အလွန်မြင့်မားသော rated ခဲ့သည်ဟူသောအချက်ကိုထည့်သွင်းစဉ်းစား။ သူကအသက်ပဲ 2009 နှစ်ပေါင်းခဲ့သောအခါဤ 14 အတွက်ဖြစ်ပျက်ခဲ့သည်။
Tiemoue Bakayoko ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်:Makalele ရဲ့ခြေရာကိုအောက်ပါ
သူ 31 လီဂူး 1 ဖျော်ဖြေပွဲလုပ်ရသောမိုနာကိုမှာသူ၏ပထမဦးဆုံးနှစ်ဦးကိုရာသီ, အပြီးတွင် Bakayoko သည်သူ၏အလားအလာဖြည့်ဆည်းရန်သူ၏အပြုအမူကိုပြောင်းလဲဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။ အားလုံးဇန်န 2016 အတွက်မိုနာကိုနည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာညွှန်ကြားရေးမှူးအဖြစ်ခန့်အပ်ခြင်းခံခဲ့ရသည်သောမိမိဆရာ, Claude Makalele မှကျေးဇူးတင်စကား။
Bakayoko မှ Makalele ၏အခန်းကဏ္ဍကို
"Makéléléကိုအလွန်ငါ့ကိုကူညီပေးခဲ့သည်။ သူမိုနာကိုရောက်လာသည့်အခါကျွန်မသိပ်ကိုကောင်းသောကစားသမားမဟုတ်ခဲ့ပေမယ့်ကျွန်မသူ့ကိုနှင့်အတူဆွေးနွေးအများကြီးရှိခဲ့ပါတယ်။ သူကကျွန်မကိုအကြံဥာဏ်တွေအများကြီးပေးခဲ့တယ်နှင့်မည်သို့ပိုပြီးရိုးရှင်းစွာဘောလုံးငါ့စတိုင်ကစားရန်သင်ပေးတယ်။ သူကပင်ငါ့ကိုအပိုလေ့ကျင့်ရေးအကူအညီများဘို့သူ့ကိုဖုန်းဆက်ဖို့ခွင့်ပြုခဲ့ပါသည်။ "
Tiemoue Bakayoko ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်:quick Maturity
သူကပိုအစေးကိုချွတ်သူ့ကိုယ်သူဂရုစိုက်နိုင်စောငျ့ရှောကျမှီကတာရှည်မယူခဲ့ပါဘူး။ ယင်းအစေးတွင်သူသည်ကလပ် 1 / 2016 ရာသီအတွက်လိဂ် 2017 ခေါင်းစဉ်အနိုင်ရကူညီပေးနေ, မိုနာကိုတစ်ပုံမှန်အစည်းအဝေး starter ဖြစ်လာခဲ့သည်။ သူကတသမတ်တည်းဖျော်ဖြေပွဲနှင့်အတူမိုနာကိုရဲ့အဖွဲ့၏အရေးပါသောအစိတ်အပိုင်းအဖြစ်သူ့ကိုယ်သူထူထောင်ခဲ့သူနည်းပါးလာဒဏ်ရာရှိခဲ့ခြင်းနှင့်လေ့ကျင့်ရေးကာလအတွင်းကသူ၏လျှောက်လွှာမရှိတော့ဝေဖန်ခဲ့သည်သာ။
Bakayoko Maturity Timeline ကို
ယနေ့ Bakayoko နောက်ဆုံးတော့ရင့်ကျက်ထားပါတယ်။ သူကကောငျးစှာအသုံးပွုဖို့ဗဟိုကွင်းလယ်အတွက်အာဏာနှင့်ရူပါရုံကိုမိမိပေါင်းစပ်ထားလိုက်ပါတယ်။
Tiemoue Bakayoko ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်:Play ကို၏စတိုင်
Bakayoko နှိုင်းယှဉ်ထားသည် Yaya Tours ကြောင့်အရှိန်အဟုန်၏သူ၏ခိုင်ခံ့သော All-ပတ်ပတ်လည်အရည်အသွေးတွေ, ဂိမ်းအသိဉာဏ်စာဖတ်ခြင်း, 'passes များနှင့်အောင်မြင်သော ယူ. , ဖြတ်သန်းနှင့် dribbling ကြားဖြတ်စွမ်းရည်ရန်။ မိမိအအရေးပါဆုံးအရည်အသွေးမြင့်သည်သူ၏ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့် athleticism ဖြစ်ပါတယ်။
Play ကို၏ Bayoko စတိုင်
သူခုခံကာကွယ်ကွင်းလယ်အခန်းကဏ္ဍအတွက်အထူးကုဖြစ်ပါတယ်။ တိုက်ခိုက်မှုတက်ကိုချိုးဖျက်နှင့်ရှေ့ဆက်ပြေးမောင်းနှင်အောင်ရန်သူ၏စွမ်းရည်နှစ်ခုသာကစားသမား (Gabi နှင့်ဒန်နီ Drinkwater) ကို 2016 / 2017 ချန်ပီယံလိဂ်ရာသီတွင်ပိုမိုအောင်မြင်တစ်ခုခုဖြစ်ခဲ့သည်။
Bakayoko ကွင်းလယ်လူ Ratings အဖွဲ့
မိုနာကိုမှာ Bakayoko ရဲ့ mananger, လီယိုနာဒို Jardimတစ်ချိန်က said: "သူကဘောလုံးတွေအများကြီးဆွတ်ခူး, အဖွဲ့မှချိန်ခွင်လျှာတတ်၏။ သူကောင်းကောင်းဘောလုံးကိုဖြတ်သန်းနှင့်သူ၏ duels အနိုင်ရရှိခဲ့ပါသည်။ ဒါက Bakayoko ရဲ့အခန်းကဏ္ဍဖြစ်ပါတယ်။ သူဟာပြန်လည်နာလန်ထူခြင်းနှင့်အမှတ်ပေးအဆုံးအဖြတ်ရည်မှန်းချက်များမှာကောင်းပါတယ်တစ်ခုပြီးပြည့်စုံသောကွင်းလယ်လူတစ်ဦးအရေးကြီးသောအားကစားရှိနေခြင်းဖြစ်၏။ "
Tiemoue Bakayoko ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်:အဆိုပါ Black Knight
သူ၌ရှိသမျှကိုသှေး၏, Bayoko ရဲ့ခိုင်မာခြင်းနှင့်ကြမ်းတမ်းညာဘက်ရှိတက်သည်နှင့်သူ၏အရောင်းရဆုံးအချက်ဖြစ်ပါတယ်။
သူကတစ်ဦးမျက်နှာဖုံးဝတ်ဆင်ဘာဖြစ်လို့လူမျိုး၏လောတကိုမေးမြန်းကြသနည်း ... အခုတော့အကြှနျုပျတို့သညျအဖြေပေးလေ့ရှိသည်။
Bakayoko တစ်ချိန်ကမိုနာကိုရဲ့ချန်ပီယံလိဂ်ဂျူဗင်တပ်ဆန့်ကျင် Semi-ဗိုလ်လုပွဲပထမအကျော့ဖို့ run ကို-up, သင်တန်း၌သူ၏နှာခေါင်းကိုဖဲ့။
သူကသောအီတလီဆန့်ကျင်မှ စတင်. ကနေသူ့ကိုဟန့်တားပါစေနှင့်သူ့ကိုတစ်အံ့ဩခြင်းစူပါဟီးရိုး၏လေကြောင်းနှင့်၏ခေါင်းစဉ်ကိုငှားတဲ့အထူးအကာအကွယ်အနက်ရောင်မျက်နှာမျက်နှာဖုံးဝတ်ဆင်ရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့ဘူး '' Dark Knight ''.
Bakayoko နေဆဲသည်သူ၏ယခင်ကကြိုးပဲ့လက်ဝဲဒူးအတွက်ဝေဒနာခံစားလာရပါတယ်။ အထက်တိကျမ်းစာ၌လာသည်နှင့်အမျှသူကလေးငယ်များအတွက်အဖြစ်ကျိုးခြေထောက်နှင့်အတူဘေးချိတ်ကာရှည်ရှည်စာလုံးပေါင်းကျော်လွှားနိုင်ခဲ့ပါတယ်။
Tiemoue Bakayoko ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်:ပန်းရောင်ကနေအနက်ရောင် (အပိုင်း 2) မှ
Infact, Bakayoko ယခင်ပြင်သစ်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ Claude Makalele နှငျ့တှေ့ဆုံခွငျးအပြီးတွင်သူ၏ဘဝပုံစံပြောင်းလဲမှုများအများကြီးကြုံတွေ့။ သူကတစ်ဦး dapper ရူပမှပုံမှန်ရှိခြင်းကနေအသွင်ပြောင်း။
ယနေ့တွင်သူသည်အစေးအပေါ်နဲ့ off နှစ်ဦးစလုံးတစ်ဦးအထင်အမြင်စေသည်။ တစ်ဦး 1.84m ပြုရန်တွန်းအားပေးသူသူ၏ဆံပင်ပန်းရောင်တနေ့ဆေးဆိုး, သူ့အသွင်အပြင်မှကြွလာသောအခါ, လာမယ့် blonde မျှကျုံ့ခရမ်းရောင်ဖြစ်ပါတယ်။
Bakayoko ဆံပင် Styles
သူ 2014 အတွက်မိုနာကိုရောက်ရှိလာခဲ့သည့်အခါသူကပန်းရောင် Porsche Cayenne ၏ဘီးနောက်ကွယ်မှဇိမ်ခံ villa ၏ကံကြမ္မာအနေဖြင့်ထွန်းသစ်စမြင်စေနိုင်ပါတယ်။
Bakayoko တစ်ချိန်ကအနက်ရောင်မှပန်းရောင်ကနေသူ့ကားများအပေါငျးတို့သအရောင်ပြောင်းလဲသွားတယ်။ ထို့အပြင်သူကလက်ဝှေ့စတင်ခဲ့ပြီးလညျးမိမိအစားအသောက်များတွင်ပြောင်းလဲသူ၏ခွန်အားတိုးတက်လာသည်။
သို့သော် Rennes မှာသူ့ယခင်လူငယ်နည်းပြအားဖြင့်အစပျိုးသဘောထားကိုအတွက်ပင်လယ်ပြောင်းလဲမှု, ပြီးနောက်, သူတစ်ဦးထက်ပိုကျိုးနွံတိုက်ခန်းများအတွက် villa ဖလှယ်မှုနှင့် Cayenne အနက်ရောင် resprayed တယ်။ သူကရှင်းပြသည်: "သူတို့ကငါကိုသာအမှုမဟုတ်ခဲ့သည့်အဆင့်မြင့်လစာများအတွက် (မိုနာကိုမှ) လာချင်ပါတယ်အကြောင်း, ငါ grafter မဟုတ်ခဲ့ကြောင်း, အသက်ရှင်ခြင်းကိုငါအတွက်ကောင်းတဲ့အမှုအရာချစ်ကြောင်းကိုပြောနေခဲ့သည်။ "
Tiemoue Bakayoko ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်:အဘယ်အရာကိုမိမိအနံပါတ်သနည်း
Bakayoko မိုနာကိုမှာမိမိဂျာစီပေါ်အရေအတွက်ကို 14 sported ။ သူဟာ 14 သြဂုတ်လ 17 အပေါ်အိုင်ဗရီကို့စ်မိဘများမှမွေးဖွားခဲ့သည်နှင့်ချယ်လ်ဆီးတို့အတွက်တူညီသောအရေအတွက်အားဝတ်ဆင်ပါလိမ့်မယ်ဘယ်မှာပဲရစ်အတွက် 1994th arrondisement (ခရိုင်) အားအခွန်ဆက်ထဲမှာရွေးယူကြ၏။
Tiemoue Bakayoko ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်:Deschamps တစ်ပန်ကာ
ပြင်သစ်နည်းပြ Didier Deschamps အဆိုပါ Bakayoko နျဖိုးထားလူ့အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုအပြည့်အဝပေးဆောင်-Up အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်။
အဆိုပါ 1998 ကမ္ဘာ့ဖလားအနိုင်ရကပ္ပတိန်ကိုကြီးစွာသောကစားသမားအောင်သို့သွားသောပါဝင်ပစ္စည်းများအကြောင်းအရာသို့မဟုတ်နှစ်ဦးကိုသိတယ်။ သူကဥရောပထဲကမန်ချက်စတာစီးတီးစွန့်ပစ်၌သူ၏သော့ချက်အခန်းကဏ္ဍပြီးနောက်ပြင်သစ်ကစားသမားတစ်ပါတ် join ဖို့ Bakayoko ဆင့်ခေါ်။ Deschamps ထို့နောက် said: သူဟာအင်အားကြီးမားပြီးသက်ရောက်မှုရှိစေတယ်၊ ​​အဆုံးအဖြတ်ပေးတဲ့ရည်မှန်းချက်ကိုဂိုးသွင်းတယ်၊
Tiemoue Bakayoko ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်:မိမိအ Header ကိုနှိမ့်ချစီးတီး
အချိန်မရွေးမန်ချက်စတာစီးတီးကိုသူတို့သူပါသညျနိုင်စွမ်းထိခိုက်ပျက်စီးမှုသာလွန်းသတိထားမိပါလိမ့်မည်, Bakayoko ကစားကြည့်ဖို့ Stamford Bridge ကိုမှာရောက်လာပါလိမ့်မယ်။ သမိုင်းမှကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
နောက်ကျောမတ်လ, သူ့ထိပ်တန်း header ကိုအချိန်ကနေ 13 မိနစ်ကွာရည်မှန်းချက်များအပေါ်နောက်ဆုံး-16 ထွက်ပေါက်တစ်ဦးနာကျင်ချန်ပီယံလိဂ်မှဂွာဒီယိုလာရဲ့စီးတီးပြစ်တင်ရှုတ်ချလိုက်ပါတယ်။ စီးတီးဟာ 5-3 ပထမဦးဆုံး-ခြေထောက်အနိုင်ရရှိပြီးနောက်လည်စည်းကိုထိန်းချုပ်အတွက်ခွင့်အတွက်ရောက်ရှိလာခဲ့သည်။ နှင့်သွားကြဖို့ 19 မိနစ်နှင့်အတူသူတို့ Bakayoko မိုနာကိုတစ်ဦးကျော်ကြားအောင်ပွဲပေးရအိမ်မှာသောမတ်စ် Lemar ရဲ့အခမဲ့-ကန်ကိုဖွင့်ဖို့သာအဘို့, ရှေ့မှောက်၌ 6-5 ခဲ့ကြသည်။ “ ချန်ပီယံလိဂ်မှာဂိုးသွင်းဖို့အရမ်းပျော်တယ်။ ဒါကိုကျွန်တော်မမျှော်လင့်ခဲ့ပါဘူး သူကပြောပါတယ်။
Tiemoue Bakayoko ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်:အဘယ်ကြောင့်ချယ်လ်ဆီးအသင်းကိုယ်တော်ကိုလက်မှတ်ထိုး
သမ္မာတရားကိုပြောသည်လိမ့်မည်။ သူတို့ကမော်ရင်ဟိုရဲ့အစီအစဉ်ကနေသူ့ကိုခိုးလေ၏။ သူသည်မိမိသတ်မှတ်ချက်နှင့်ကိုက်ညီသောကွောငျ့အထူးတဦးတည်းကသူ့ကိုချစ်တော်မူ၏။ (ခိုင်ခံ့သောအစွမ်းထက်နဲ့ Quick) ။
ချယ်လ်ဆီး Bakayoko လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့အဘယ်ကြောင့်
သူဟိုဆေးမော်ရင်ဟိုမှအန်တိုနီယိုအဆက်ကိုပိုမိုနှစ်သက်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ Tiemoue Bakayoko ချယ်လ်ဆီးအစားမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ရွေးချယ်ခဲ့သည်။ သူကပင်သူ့ကိုစိတ်ဓာတ်ကျကိုဖန်ဆင်းသောအထူး One မှဖုန်းခေါ်ဆိုမှုဆင်းလှည့်။
Bakayoko ချယ်လ်ဆီးမှာမိမိရောက်ရှိသည့်အချိန်တွင် said: "ဒါဟာကျွန်မသူအများဆုံးယုံကြည်စိတ်ချလမ်းအတွက်ငါ့ထံသို့အယူခံမယ်လို့ဘယ်လောက်မတိုင်မီသတိပေးခဲ့သည်ခဲ့ချင်ပါတယ်သော်လည်းမော်ရင်ဟိုငါ့ကိုပဌနာရှိသည်ဖို့အံ့သြဖွယ်ဖြစ်ခဲ့သည်။ ငါယူနိုက်တက်ပြောင်းရွှေ့သင့်ပါတယ်ဘာကြောင့်တွေအကြောင်းကသူ့ဆင်ခြေမှနားထောင်ခဲ့တယ်။ သူကကျွန်မချယ်လ်ဆီးနှင့်မသူ့ကိုစောင့်ကြည့်ဖွင့်စိုက်ပျိုးကြပါပြီ, တစ်ခုခုကိုသိဘူး။ ဒါဟာကျွန်မရဲ့ငယ်စဉ်ကလေးဘဝအတွက်အလွန်ကိုခစျြတဲ့ကလပ်ကြောင့်ချယ်လ်ဆီးတို့အတွက်လက်မှတ်ထိုးငါ့အဘို့သဘာဝအရာပဲ။ "
မော်ရင်ဟို Vs အဆက်
Tiemoue Bakayoko ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်:တစ်ဦးပုဂ္ဂလိကဂျက်အပေါ်ချယ်လ်ဆီးရောက်ရှိလာ
Tiemoue Bakayoko ရတယ် ချယ်လ်ဆီး ပရိတ်သတ်တွေပြင်သစ်ကနေလန်ဒန်ကိုပျံသန်းဖို့သတ်မှတ်ထားခဲ့သည့်ပုဂ္ဂလိကဂျက်လေယာဉ်ပေါ်ကိုရတဲ့ကိုယ်တော်တိုင်၏ရုပ်ပုံပို့စ်တင်နေဖြင့်စိတ်လှုပ်ရှားမိပါတယ်။ ဤသည်ဂျက်လေယာဉ်ဟာချယ်လ်ဆီးအသင်း join ဖို့လန်ဒန်ကိုသူ့ကိုခေါ်သွားတယ်။ ဒါကဆေးဝါးကုသမှုခံယူခြင်းနှင့်ချယ်လ်ဆီးနဲ့စာချုပ်လက်မှတ်ထိုးရန်သူ၏ခရီးစဉ်ဖြစ်ခဲ့သည်။
သူကမက်ဆေ့ခ်ျကိုနှင့်အတူရုပ်ပုံလိုက်ပါသွား: "လေယာဉ်ရဲ့သွားကြကုန်အံ့ ... I'am ဂုဏ်နချဲလ်ဆီးအသင်းနှင့်အတူအကောင်းတစ်ဦးရက်သတ္တပတ်များ" လေယာဉ်ရုပ်ပြောင်တရံနှင့်အတူလိုက်ပါသွား။
Youri Tielemans ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်
Dominic Solanke ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်
ဂျိုအာ Moutinho ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်
ရှမွေလသည် Eto'o ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်
နာသန် Ake ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်
Djibril ဆေးရဲ့သူမတူတဲ့ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်
ရိုင်ယန်ဘာထရန်ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်
ယောဟန်သည်တယ်ရီကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်
မိုက်ကယ် Essien ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်
အန်သိုနီစစ်အုပ်ချုပ်ရေးကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်
Edin Dzeko ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်
ပြုပြင်ထားသောနေ့စွဲ - မတ်လ ၆၊ ၂၀၁၉
အန်တိုနီယိုအဆက်ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်
Emmanuel Adebayor ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်